Sinjani isimo sezulu saseMedithera | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Sinjani isimo sezulu saseMedithera
El Isimo sezulu saseMedithera yisimo sezulu esipholile esibonakala ehlobo elishisa kakhulu nelomile futhi ubusika obumnene nobunemvula. Zonke izifundazwe ezisendaweni yaseMedithera zinalesi simo sezulu, kodwa futhi sikhona nakwezinye izindawo zeplanethi, njengeCalifornia (United States).
Izimvula ziyindlala kakhulu, kuze kufike ezingeni lokuthi izinyanga ezi-3 kuya kwezi-6 zingadlula ngaphandle kwesiphepho esikhulu. Ngakho-ke isomiso siyinkinga ekhathaza kakhulu, ngoba ezindaweni eziningi ayiwi ngaphezu kuka-100-150mm. Thola ukuthi isimo sezulu saseMedithera sinjani.
1 Izinhlobo zesimo sezulu saseMedithera
1.3 IMedithera enethonya lasolwandle
2 Impilo eMedithera
Izinhlobo zesimo sezulu saseMedithera
I-Climograph yase-Almería (eSpain)
Izinhlobo ezine zesimo sezulu saseMedithera ziyahlukaniswa, okuyilezi:
Yiyo enikezwa engxenyeni enhle yogu lwaseMedithera, ngaphandle kwaseGibhithe nengxenye yeLibya neTunisia. Izinga lokushisa eliphakathi lingaphezulu kwe- I-18ºC, kanti ubusika bunomswakama futhi buyana, kanti ihlobo lome kakhulu futhi liyashisa (lingafinyelela kuma-38ºC ngokushisa okushisayo).
ESpain, ikakhulukazi eCatalonia, eBalearic Islands kanye nengxenye enhle yoMphakathi waseValencian, banesimo sezulu.
Kwenzeka ezindaweni ezikude kakhulu nogu, njengoba kukhona umswakama osezingeni eliphansi. Ama-amplitudes ashisayo abonakala kakhulu. Kungaba nobusika obubandayo obunamakhaza namakhaza amnene, noma ubusika obumnandi namakhaza ashisa kakhulu.
Amazwe afana ne-Italy, Cyprus, Turkey, Lebanon noma ngaphakathi kweSpain, lesi simo sezulu siyenzeka.
IMedithera enethonya lasolwandle
Kwenzeka ogwini lwaseMedithera, ngokuba ogwini olusentshonalanga yenqwaba yezwekazi. Kule ndawo, ihlobo likhona ithambile (30ºC noma ngaphansi) futhi yomile lapho kwenzeka khona iMedithera ejwayelekile, kanti ubusika buba nemvula ethe xaxa.
Iningizimu yeGalicia, ugu lwaseCalifornia, izindawo zasePerth nase-Adelaide e-Australia, ngezinye zezindawo ezinalesi simo sezulu.
Yileso esenzeka ekushintsheni phakathi kwesimo sezulu saseMedithera nogwadule. Kubonakala ngokuba namazinga okushisa aphakathi nendawo aphakeme kune- I-20ºC, ukwazi ukudlula ama-45ºC ngesikhathi sokushisa. Imvula incane kakhulu, ibanga phakathi kuka-200 no-400mm.
ESpain kwenzeka e-Alicante, e-Almería nasengxenyeni enhle yaseMurcia. Kuyenzeka futhi eGrisi, eMorocco, e-Algeria, eLibya, kwa-Israyeli, eTunisia, e-Australia, ePortugal, eJordani, eChile, eSyria naseMexico.
Ezindaweni lapho kwenzeka khona isimo sezulu saseMedithera, impilo ayilula. Kokubili izitshalo nezilwane kumele zikwazi ukumelana namazinga okushisa aphezulu ehlobo, kanye nokuntuleka kwemvula.
Ezinye zezibonelo zempilo esingazithola yilezi ezilandelayo:
Fauna: impisi, i-lynx, i-hedgehog, i-toad, isibankwa, ufudu lwaseMedithera, ukhozi lwasebukhosini.
Sithemba ukuthi ufunde okuningi ngalesi simo sezulu c.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Sinjani isimo sezulu saseMedithera
3 izicelo kumele ube ukwazi sezulu ngesikhathi sangempela
Ngabe inyanga idala ukuzamazama komhlaba okukhulu?